မြန်မာ့ရိုးရာအစားအသောက်တွေကို အရည်အသွေးမီ၊ စိတ်ချရတဲ့ စားသောက်ကုန် ဖြစ်စေချင်တာမို့ Tree Food ကို လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါလို့ ဆိုလာတဲ့ မချိုလဲ့အောင် - For her Myanmar
မြန်မာ့ရိုးရာအစားအသောက်တွေကို အရည်အသွေးမီ၊ စိတ်ချရတဲ့ စားသောက်ကုန် ဖြစ်စေချင်တာမို့ Tree Food ကို လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါလို့ ဆိုလာတဲ့ မချိုလဲ့အောင်
ကိုယ်တွေဆို ဒီအစ်မလို တွေးမိမှာ မဟုတ်ဘူးရယ်…
ယောင်းတို့ရေ .. For Her Myanmar က တင်ဆက်ပေးနေကျ အင်တာဗျူးကဏ္ဍမှာ ဒီတစ်ခေါက် ဖော်ပြပေးမယ့်သူကတော့ Tree Food စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းကို တည်ထောင်သူ မချိုလဲ့အောင်ပါပဲ။ အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကို တည်ထောင်ထားနိုင်သူ မချိုလဲ့အောင် ပြောပြပေးခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ …
Q : အရင်ဆုံး အစ်မရဲ့အကြောင်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါနော်။
အစ်မ နာမည်က မချိုလဲ့အောင်ပါ။ အစ်မက စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းကို ၂၀၁၅ လောက်ကတည်းက စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အစ်မက ဆေးကျောင်းကနေ ကျောင်းပြီးခဲ့ပါတယ်။ ဆေးကျောင်းပြီးတော့ ဝါသနာ မပါတာရော၊ ကိုယ်နဲ့ မကိုက်တာရောကြောင့် ဆက်မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ဘဲ အခုလိုစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့တာပါ။
Q : စီးပွားရေးလောကထဲကို ဘယ်လိုဝင်ခဲ့တာလဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါဦး။
အစ်မ ပထမဆုံး စီးပွားရေးလုပ်ဖြစ်တာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တုန်းကပါ။ အဲဒီတုန်းက အစ်မတစ်ယောက်နဲ့ပေါင်းပြီး လူငယ်တွေအတွက် အင်္ကျီ brand တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ကြသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီတုန်းက လူငယ်တွေက ဖက်ရှင်တွေကို သိပ်စိတ်မဝင်စားကြသေးတော့ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ ဒါနဲ့ နောက်ပိုင်းကျတော့ အင်္ကျီချုပ်ဆိုင်ပဲလုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ အင်္ကျီချုပ်ဆိုင်ကတော့ အစ်မရဲ့ အစ်မကိုပဲ support ပေးခဲ့တာ။ အစ်မကတော့ သိပ်စိတ်မဝင်စားဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ်ပိုင်တစ်ခုလုပ်ဦးမယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားဖြစ်တာပေါ့။
Q : Tree Food စားသောက်ကုန်စလုပ်ဖြစ်တာ ကိုလည်းပြောပြပါဦး။
တစ်ရက်မှာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုက အချိုတည်းဖို့ ထန်းလျက်ချပေးတာကို စားကြည့်တယ်။ စားချင်စိတ်ရှိလို့ စားကြည့်တော့ စားလို့တော့ ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ အတုံးကအရမ်းကြီးတော့ စားလို့မကုန်ဘူး။ အလဟဿ ဖြစ်ကုန်တာပေါ့။ အဲဒီမှာ စ စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ ထန်းလျက်ကို အတုံးသေးသေးလေးတွေ လုပ်လို့ရမလားပေါ့။ အဲဒါကို စိတ်ဝင်စားတာကြောင့် ပဲခူးက ထန်းတက်သမားတွေနဲ့ တွေ့ပြီး မေးကြည့်တယ်။ အတုံးသေးသေးလေးတွေ လုပ်ကြည့်လို့ရမလားဆိုတော့ သူတို့ကပြောတယ် အဆင်မပြေဘူး ၊ လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်.. အဲဒီမှာ အစ်မက ဘာလို့မရမှာလဲ။ ငါ့ဘာသာ စမ်းလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး လုပ်ကြည့်တာ။ စလုပ်ကာစကတော့ အရည်တွေ ပျော်သွားတာမျိုးဖြစ်သေးတယ်။ အကြိမ်ကြိမ်ပြန်စမ်းလုပ်ကြည့်ပြီး နောက်ပိုင်းတော့အောင်မြင်သွားတယ်။
အဲဒီတော့ ဟုတ်ပြီ။ ထန်းလျက်သေးသေးလေးတွေ လုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းကိုတော့ သိသွားပြီ။ အဲဒါဘာလုပ်ရမှာတုန်းလို့ ကိုယ့်ဘာသာပြန်မေးကြည့်တယ်။ အနောက်နိုင်ငံမှာဆို ချောကလက်ကို ကြိုက်လို့စားတာရှိတယ်။ ပျော်လို့၊ ဝမ်းနည်းစားတာရှိတယ်။ လက်ဆောင်ပေးကြတာရှိတယ်၊ သူ့ရဲ့ တန်ဖိုးတွေအများကြီးရှိတယ်။ ထန်းလျက်ကရော ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားပေါ့။ သူ့ရဲ့နဂို ထန်းလျက်ဆိုတဲ့ Value ကို ထပ်ထပ်ပြီးပေါင်းလို့ မရနိုင်ဘူးလားလို့ တွေးမိတယ်။ အဲဒါနဲ့ အစ်မ ထန်းလျက်ထဲကို အရသာတွေ ထပ်ထည့်တယ်။ ထုပ်ပိုးမှုကို အစ်မကိုယ်တိုင် ဒီဇိုင်းဆွဲတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ပဲ Tree Food ကနေ ထန်းလျက်ကို အရသာလေးမျိုးနဲ့ ထုတ်ဖြစ်တယ်။
Related Article >>> ဘယ်နေရာမဆို ယောကျာ်းလေးတွေနဲ့ယှဉ်ယှဉ်ပြီး ရင်ဘောင်တန်းနေရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်က ကျော်တက်သင့်ရင်လည်း ကျော်တက်ရမယ် ဆိုတဲ့ sfx မိတ်ကပ်ပညာရှင် စောယုနန္ဒာ @ စုန်း
Q : Tree Food အနေနဲ့ နောက်ထပ် စားစရာ အသစ်တွေ ထပ်ထုတ်ဖို့ စိတ်ကူးရှိလား?
အခု ကြက်သွန်ဖြူကုလားပဲချောင်းဆိုပြီး ထပ်ထုတ်ထားတာ ရှိပါတယ်။ အစ်မရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ထန်းလျက်တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲ မြန်မာ့ရိုးရာအစားအသောက်တွေကို အရည်သွေးမီတဲ့ စိတ်ချရတဲ့ စားသောက်ကုန် ဖြစ်စေချင်တာပါ။ အစ်မ ပဲချောင်းလုပ်ဖို့ လိုက်လေ့လာတဲ့အခါ ပဲချောင်းလုပ်တဲ့ ဖိုတွေ ပိတ်ကုန်တာ တွေ့ရတယ်။ တချို့ကလည်း မကိုက်လို့၊ တချို့ကလည်း တခြားအလုပ်ကို ပြောင်းသွားတာမျိုး၊ ပွဲတော်ရှိမှ ဖိုကို ဖွင့်တာမျိုးတွေပဲ လုပ်ဖြစ်တော့တယ်။
အစ်မတို့ မြန်မာ့ရိုးရာမုန့်တွေက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေပါပြီ။ အရည်အသွေးမီတဲ့ မုန့်တွေလည်း တွေရတာနည်းသွားပြီ။ အဲဒါကြောင့် ရိုးရာမုန့်တွေကို ပြန်ဖော်ထုတ်တဲ့အနေနဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းကစားခဲ့တဲ့။ ကြက်သွန်ဖြူပဲချောင်းကို ထုတ်ဖြစ်တာပါ။
Related Article >>> စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ခိုင်မှုတွေနဲ့အတူ ရေခဲတောင်ကို တက်နိုင်ခဲ့တဲ့ မဖီဘီဟန် (Phoebe Han)
Q : အစ်မကိုယ်တိုင် နယ်ကိုသွားပြီး အညာက ထန်းသမားကြီးတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ဖြစ်တဲ့အခါ ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတွေ၊ အမှတ်တရဖြစ်ရပ်လေးတွေရှိရင်လည်းပြောပြပါဦး။
အမ သိနားလည်ထားတာက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုရဖို့ဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်လေးစားမှုရှိဖို့လိုတယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် အစ်မ က သူတို့တွေကို လေးလေးစားစား ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ စစချင်းမှာတော့ အဆင်မပြေတာ၊ ကုန်ကြမ်း ညံ့တာ ကုန်ကြမ်း လိမ်တာတွေ ကြုံခဲ့ရပေမဲ့ နောက်ပိုင်းတော့ အဆင်ပြေလာပါတယ်။
ချစ်ဖို့ကောင်းတာတွေလည်း ရှိတယ်။ အစ်မက သူတို့တွေနဲ့ထန်းတောထဲလိုက်သွားပြီး လျှောက်မေးတယ်။ အဘ ဘာလို့ ထန်းပင် အဖို နဲ့ အမ ကွဲရတာလဲပေါ့။ အဲဒီမှာ အဘ က မသိဘူးလေ။ သူ့ဘာသာသူ အစကတည်းက ဖြစ်နေတာပဲလို့ ပြန်ဖြေတယ်။ ရိုးသားတာပေါ့နော်။ သူတို့မှာက စာတွေ့မရှိဘူး။ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်နေကြတာ။
သူတို့ရဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်တွေရှိတဲ့အခါလည်း ကိုယ်တွေကို လာခေါ်ကြတာတွေရှိတယ်။ မိသားစုလိုဖြစ်သွားကြတာပေါ့။
Q : သူတို့တွေ ကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကရော ဘာတွေလဲဆိုတာ အစ်မသိခဲ့ရလား
သူတို့အခက်အခဲတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ အစ်မနဲ့ အလုပ်မလုပ်ခင်ကဆိုရင် သူတို့တွေက ကြားခံလူတွေနဲ့ (ပွဲစားတွေ) အလုပ်လုပ်ရတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့တွေက မြို့မှာ ဘယ်ဈေးတွေပေါက်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူး။ ကြားခံလူတွေက ဒိုင်က ဘယ်ဈေးပေးတယ်။ အဲဒီဈေးမှ မပေးရင် မဝယ်ဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့ ကြုံရတယ်။ အဲဒီတော့ ပေးတဲ့ဈေးနဲ့ ရောင်းလိုက်တာမျိုးတွေ ရှိတယ်။
Q : အစ်မ ရဲ့ လုပ်ငန်းတွင်းမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့ လူငယ်တွေနဲ့ရော ဘယ်လို ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ထားလဲ။
အစ်မက ကိုယ့်လုပ်ငန်းထဲက လူတွေ နဲ့ ရေတိုဆက်ဆံရေးမျိုးထက် ရေရှည်ဆက်ဆံသွားကြတဲ့ ပုံစံမျိုးကိုသဘောကျတယ်။ အခုပဲ လက်တွဲအလုပ်လုပ် နောက်တော့ လက်တွဲဖြုတ်ကြဆိုတာမျိုး မကြိုက်ဘူး။ ပြီးတော့ အစ်မ အလုပ်လုပ်တာ ငွေကြေးတစ်ခုတည်းကို ကြည့်ပြီး လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။
ကိုယ့်ရဲ့ ဝယ်ယူသူတွေကိုလည်း စိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်။ ကုန်ကြမ်းပေးသူတွေ၊ ဝန်ထမ်းတွေ နဲ့ ကိုယ်နဲ့ကြား အပြန်အလှန် ကြည့်ရှုဆက်ဆံတာမျိုးပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်။
Q : အစ်မ အနေနဲ့ ကျောင်းပြီးတဲ့အခါ ဆရာဝန်တစ်ယောက်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် တည်ငြိမ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်ရတယ်လို့ ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်။ အခုလိုမျိုး လုံးဝကွဲပြားတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြောင်းလိုက်တော့ အစ်မအတွက် ပိုပြီး စိန်ခေါ်မှုများတယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့။ အဲဒီလိုပြောင်းလဲကာစ က ကြုံရတဲ့အဖြစ်တွေကိုပြောပြပါဦး
အဲဒီတုန်းက အိမ်ကို ဆရာဝန်မလုပ်တော့ဘူးလို့ ပြောလိုက်တဲ့အခါ အကုန်လုံး Shock ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဆရာဝန်မလုပ်ဘူးဆိုရင် ဘာလုပ်မှာတုန်းလို့ မေးကြတော့လည်း ရေရေရာရာမဖြေနိုင်ဘူး။ မသိဘူးလို့ တစ်ခုခုတော့ လုပ်မယ်လို့ပဲ ပြောလိုက်တယ်။
အဲဒီတုန်းက ကိုယ့်ကိုယ်မျှော်မှန်းထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုစိတ်ပျက်အောင်လုပ်ခဲ့သလိုဖြစ်သွားတယ်။ အားလုံးကစိတ်ပျက်ကြတယ်။ လေလွင့်နေတယ်ပေါ့။ အဲဒီတုန်းက အမလည်း စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ လမ်းတွေ ပတ်လျှောက်နေတယ်။ တချို့တွေကဆို အိမ်ကိုမေးတယ်။ နင့်သမီးက ဘာလုပ်နေတာလဲ ဆိုပြီးလေ.. စိတ်ထဲမှာတော့ တစ်နေ့ကျရင် တစ်ခုခုလုပ်ပြမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်လေး ရှိတာပေါ့။
Q : အခုဆိုရင် အစ်မလည်း အောင်မြင်လာပြီ။ ဒီလိုမအောင်မြင်ခင်က ကြုံခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲတွေရှိရင်လည်း ပြောပြပါဦး။
အခက်အခဲတွေလည်းရှိပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြောင့် နဲ့ မရင့်ကျက်သေးတာကြောင့်လို့ အစ်မကတော့မြင်တယ်။ တစ်ခါတစ်ခါကျရင် လုပ်နေတာတွေကို ရပ်လိုက်တော့မယ်လို့ တွေးမိလိုက်တာတွေလည်းရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ သိလာတာက ကိုယ်က ပြဿနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်းလိုက်တိုင်း တစ်ဆင့်ပိုတက်သွားတယ်။ သူများတွေထက် ပိုသာသွားတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ပြဿနာတွေဆိုတာက ကြုံကိုကြုံရမှာပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အပေါ်ရောက်လာမှာပါပဲ။
ဒါကတော့ မချိုလဲ့အောင် မျှဝေပေးခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ အကြောင်း၊ သူ့ရဲ့ အားထုတ်မှုတွေ နဲ့ အလုပ်ကိုမြတ်နိုးစိတ်၊ သူ့ရဲ့ ခံယူချက် စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယောင်းတို့လည်း သူ့ရဲ့စကားတွေကနေ ခွန်အားရကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်း…
ကိုယျတှဆေို ဒီအဈမလို တှေးမိမှာ မဟုတျဘူးရယျ…
ယောငျးတို့ရေ .. For Her Myanmar က တငျဆကျပေးနကြေ အငျတာဗြူးကဏ်ဍမှာ ဒီတဈခေါကျ ဖျောပွပေးမယျ့သူကတော့ Tree Food စားသောကျကုနျလုပျငနျးကို တညျထောငျသူ မခြိုလဲ့အောငျပါပဲ။ အသကျငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ လုပျငနျးတဈခုကို တညျထောငျထားနိုငျသူ မခြိုလဲ့အောငျ ပွောပွပေးခဲ့တဲ့ အကွောငျးအရာတှကေတော့ …
Q : အရငျဆုံး အဈမရဲ့အကွောငျးလေးမိတျဆကျပေးပါနျော။
အဈမ နာမညျက မခြိုလဲ့အောငျပါ။ အဈမက စားသောကျကုနျလုပျငနျးကို ၂၀၁၅ လောကျကတညျးက စတငျလုပျကိုငျခဲ့ပါတယျ။ အဈမက ဆေးကြောငျးကနေ ကြောငျးပွီးခဲ့ပါတယျ။ ဆေးကြောငျးပွီးတော့ ဝါသနာ မပါတာရော၊ ကိုယျနဲ့ မကိုကျတာရောကွောငျ့ ဆကျမလုပျဖွဈခဲ့ဘဲ အခုလိုစားသောကျကုနျလုပျငနျးကို လုပျကိုငျခဲ့တာပါ။
Q : စီးပှားရေးလောကထဲကို ဘယျလိုဝငျခဲ့တာလဲဆိုတာ ရှငျးပွပေးပါဦး။
အဈမ ပထမဆုံး စီးပှားရေးလုပျဖွဈတာ ၂၀၁၁ ခုနှဈတုနျးကပါ။ အဲဒီတုနျးက အဈမတဈယောကျနဲ့ပေါငျးပွီး လူငယျတှအေတှကျ အင်ျကြီ brand တဈခုလုပျမယျဆိုပွီးတော့လုပျဖွဈကွသေးတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီတုနျးက လူငယျတှကေ ဖကျရှငျတှကေို သိပျစိတျမဝငျစားကွသေးတော့ မအောငျမွငျခဲ့ဘူး။ ဒါနဲ့ နောကျပိုငျးကတြော့ အင်ျကြီခြုပျဆိုငျပဲလုပျဖွဈသှားတယျ။ အင်ျကြီခြုပျဆိုငျကတော့ အဈမရဲ့ အဈမကိုပဲ support ပေးခဲ့တာ။ အဈမကတော့ သိပျစိတျမဝငျစားဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ ကိုယျပိုငျတဈခုလုပျဦးမယျဆိုပွီး စဉျးစားဖွဈတာပေါ့။
Q : Tree Food စားသောကျကုနျစလုပျဖွဈတာ ကိုလညျးပွောပွပါဦး။
တဈရကျမှာ စားသောကျဆိုငျတဈခုက အခြိုတညျးဖို့ ထနျးလကျြခပြေးတာကို စားကွညျ့တယျ။ စားခငျြစိတျရှိလို့ စားကွညျ့တော့ စားလို့တော့ ကောငျးတယျပေါ့နျော။ ဒါပမေဲ့ အတုံးကအရမျးကွီးတော့ စားလို့မကုနျဘူး။ အလဟဿ ဖွဈကုနျတာပေါ့။ အဲဒီမှာ စ စဉျးစားကွညျ့မိတယျ။ ထနျးလကျြကို အတုံးသေးသေးလေးတှေ လုပျလို့ရမလားပေါ့။ အဲဒါကို စိတျဝငျစားတာကွောငျ့ ပဲခူးက ထနျးတကျသမားတှနေဲ့ တှပွေီ့း မေးကွညျ့တယျ။ အတုံးသေးသေးလေးတှေ လုပျကွညျ့လို့ရမလားဆိုတော့ သူတို့ကပွောတယျ အဆငျမပွဘေူး ၊ လုပျလို့မရဘူးပေါ့နျော.. အဲဒီမှာ အဈမက ဘာလို့မရမှာလဲ။ ငါ့ဘာသာ စမျးလုပျကွညျ့မယျဆိုပွီး လုပျကွညျ့တာ။ စလုပျကာစကတော့ အရညျတှေ ပြျောသှားတာမြိုးဖွဈသေးတယျ။ အကွိမျကွိမျပွနျစမျးလုပျကွညျ့ပွီး နောကျပိုငျးတော့အောငျမွငျသှားတယျ။
အဲဒီတော့ ဟုတျပွီ။ ထနျးလကျြသေးသေးလေးတှေ လုပျလို့ရတဲ့ နညျးလမျးကိုတော့ သိသှားပွီ။ အဲဒါဘာလုပျရမှာတုနျးလို့ ကိုယျ့ဘာသာပွနျမေးကွညျ့တယျ။ အနောကျနိုငျငံမှာဆို ခြောကလကျကို ကွိုကျလို့စားတာရှိတယျ။ ပြျောလို့၊ ဝမျးနညျးစားတာရှိတယျ။ လကျဆောငျပေးကွတာရှိတယျ၊ သူ့ရဲ့ တနျဖိုးတှအေမြားကွီးရှိတယျ။ ထနျးလကျြကရော ဒီလိုမဖွဈနိုငျဘူးလားပေါ့။ သူ့ရဲ့နဂို ထနျးလကျြဆိုတဲ့ Value ကို ထပျထပျပွီးပေါငျးလို့ မရနိုငျဘူးလားလို့ တှေးမိတယျ။ အဲဒါနဲ့ အဈမ ထနျးလကျြထဲကို အရသာတှေ ထပျထညျ့တယျ။ ထုပျပိုးမှုကို အဈမကိုယျတိုငျ ဒီဇိုငျးဆှဲတယျ။ အဲဒီလိုနဲ့ပဲ Tree Food ကနေ ထနျးလကျြကို အရသာလေးမြိုးနဲ့ ထုတျဖွဈတယျ။
Related Article >>> ဘယျနရောမဆို ယောကျြားလေးတှနေဲ့ယှဉျယှဉျပွီး ရငျဘောငျတနျးနရေတာမြိုးမဟုတျဘဲ ကိုယျက ကြျောတကျသငျ့ရငျလညျး ကြျောတကျရမယျ ဆိုတဲ့ sfx မိတျကပျပညာရှငျ စောယုနန်ဒာ @ စုနျး
Q : Tree Food အနနေဲ့ နောကျထပျ စားစရာ အသဈတှေ ထပျထုတျဖို့ စိတျကူးရှိလား?
အခု ကွကျသှနျဖွူကုလားပဲခြောငျးဆိုပွီး ထပျထုတျထားတာ ရှိပါတယျ။ အဈမရဲ့ ရညျရှယျခကျြက ထနျးလကျြတဈမြိုးတညျးမဟုတျဘဲ မွနျမာ့ရိုးရာအစားအသောကျတှကေို အရညျသှေးမီတဲ့ စိတျခရြတဲ့ စားသောကျကုနျ ဖွဈစခေငျြတာပါ။ အဈမ ပဲခြောငျးလုပျဖို့ လိုကျလလေ့ာတဲ့အခါ ပဲခြောငျးလုပျတဲ့ ဖိုတှေ ပိတျကုနျတာ တှရေ့တယျ။ တခြို့ကလညျး မကိုကျလို့၊ တခြို့ကလညျး တခွားအလုပျကို ပွောငျးသှားတာမြိုး၊ ပှဲတျောရှိမှ ဖိုကို ဖှငျ့တာမြိုးတှပေဲ လုပျဖွဈတော့တယျ။
အဈမတို့ မွနျမာ့ရိုးရာမုနျ့တှကေ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ပြောကျကှယျလုနီးပါးဖွဈနပေါပွီ။ အရညျအသှေးမီတဲ့ မုနျ့တှလေညျး တှရေတာနညျးသှားပွီ။ အဲဒါကွောငျ့ ရိုးရာမုနျ့တှကေို ပွနျဖျောထုတျတဲ့အနနေဲ့ ငယျငယျတုနျးကစားခဲ့တဲ့။ ကွကျသှနျဖွူပဲခြောငျးကို ထုတျဖွဈတာပါ။
Related Article >>> စိတျပိုငျးဆိုငျရာ၊ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ ကွံ့ခိုငျမှုတှနေဲ့အတူ ရခေဲတောငျကို တကျနိုငျခဲ့တဲ့ မဖီဘီဟနျ (Phoebe Han)
Q : အဈမကိုယျတိုငျ နယျကိုသှားပွီး အညာက ထနျးသမားကွီးတှနေဲ့ ကိုယျတိုငျအလုပျလုပျဖွဈတဲ့အခါ ကွုံရတဲ့ အခကျအခဲတှေ၊ အမှတျတရဖွဈရပျလေးတှရှေိရငျလညျးပွောပွပါဦး။
အမ သိနားလညျထားတာက တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ အပွနျအလှနျ ယုံကွညျမှုရဖို့ဆိုတာ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျလေးစားမှုရှိဖို့လိုတယျ ဆိုတာပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ အဈမ က သူတို့တှကေို လေးလေးစားစား ဆကျဆံခဲ့ပါတယျ။ စစခငျြးမှာတော့ အဆငျမပွတော၊ ကုနျကွမျး ညံ့တာ ကုနျကွမျး လိမျတာတှေ ကွုံခဲ့ရပမေဲ့ နောကျပိုငျးတော့ အဆငျပွလောပါတယျ။
ခဈြဖို့ကောငျးတာတှလေညျး ရှိတယျ။ အဈမက သူတို့တှနေဲ့ထနျးတောထဲလိုကျသှားပွီး လြှောကျမေးတယျ။ အဘ ဘာလို့ ထနျးပငျ အဖို နဲ့ အမ ကှဲရတာလဲပေါ့။ အဲဒီမှာ အဘ က မသိဘူးလေ။ သူ့ဘာသာသူ အစကတညျးက ဖွဈနတောပဲလို့ ပွနျဖွတေယျ။ ရိုးသားတာပေါ့နျော။ သူတို့မှာက စာတှမေ့ရှိဘူး။ အတှအေ့ကွုံတှနေဲ့ပဲ အလုပျလုပျနကွေတာ။
သူတို့ရဲ့ ပှဲလမျးသဘငျတှရှေိတဲ့အခါလညျး ကိုယျတှကေို လာချေါကွတာတှရှေိတယျ။ မိသားစုလိုဖွဈသှားကွတာပေါ့။
Q : သူတို့တှေ ကွုံနရေတဲ့အခကျအခဲတှကေရော ဘာတှလေဲဆိုတာ အဈမသိခဲ့ရလား
သူတို့အခကျအခဲတှကေတော့ အမြားကွီးပါပဲ။ အဈမနဲ့ အလုပျမလုပျခငျကဆိုရငျ သူတို့တှကေ ကွားခံလူတှနေဲ့ (ပှဲစားတှေ) အလုပျလုပျရတယျ။ ပွီးတော့ သူတို့တှကေ မွို့မှာ ဘယျဈေးတှပေေါကျနတေယျဆိုတာမသိကွဘူး။ ကွားခံလူတှကေ ဒိုငျက ဘယျဈေးပေးတယျ။ အဲဒီဈေးမှ မပေးရငျ မဝယျဘူးဆိုတာမြိုးနဲ့ ကွုံရတယျ။ အဲဒီတော့ ပေးတဲ့ဈေးနဲ့ ရောငျးလိုကျတာမြိုးတှေ ရှိတယျ။
Q : အဈမ ရဲ့ လုပျငနျးတှငျးမှာလုပျကိုငျနတေဲ့ လူငယျတှနေဲ့ရော ဘယျလို ဆကျဆံရေးတညျဆောကျထားလဲ။
အဈမက ကိုယျ့လုပျငနျးထဲက လူတှေ နဲ့ ရတေိုဆကျဆံရေးမြိုးထကျ ရရှေညျဆကျဆံသှားကွတဲ့ ပုံစံမြိုးကိုသဘောကတြယျ။ အခုပဲ လကျတှဲအလုပျလုပျ နောကျတော့ လကျတှဲဖွုတျကွဆိုတာမြိုး မကွိုကျဘူး။ ပွီးတော့ အဈမ အလုပျလုပျတာ ငှကွေေးတဈခုတညျးကို ကွညျ့ပွီး လုပျတာမဟုတျဘူး။
ကိုယျ့ရဲ့ ဝယျယူသူတှကေိုလညျး စိတျခမျြးသာစခေငျြတယျ။ ကုနျကွမျးပေးသူတှေ၊ ဝနျထမျးတှေ နဲ့ ကိုယျနဲ့ကွား အပွနျအလှနျ ကွညျ့ရှုဆကျဆံတာမြိုးပဲ ဖွဈစခေငျြတယျ။
Q : အဈမ အနနေဲ့ ကြောငျးပွီးတဲ့အခါ ဆရာဝနျတဈယောကျအဖွဈအလုပျလုပျခဲ့မယျဆိုရငျ တညျငွိမျတဲ့လမျးကွောငျးပျေါလြှောကျရတယျလို့ ယဘေုယအြားဖွငျ့ ပွောလို့ရမယျထငျတယျ။ အခုလိုမြိုး လုံးဝကှဲပွားတဲ့ လုပျငနျးတဈခုကိုပွောငျးလိုကျတော့ အဈမအတှကျ ပိုပွီး စိနျချေါမှုမြားတယျလို့ ဆိုရမှာပေါ့။ အဲဒီလိုပွောငျးလဲကာစ က ကွုံရတဲ့အဖွဈတှကေိုပွောပွပါဦး
အဲဒီတုနျးက အိမျကို ဆရာဝနျမလုပျတော့ဘူးလို့ ပွောလိုကျတဲ့အခါ အကုနျလုံး Shock ဖွဈကုနျကွတယျ။ အဲဒါနဲ့ ဆရာဝနျမလုပျဘူးဆိုရငျ ဘာလုပျမှာတုနျးလို့ မေးကွတော့လညျး ရရေရောရာမဖွနေိုငျဘူး။ မသိဘူးလို့ တဈခုခုတော့ လုပျမယျလို့ပဲ ပွောလိုကျတယျ။
အဲဒီတုနျးက ကိုယျ့ကိုယျမြှျောမှနျးထားတဲ့လူတှအေကုနျလုံးကိုစိတျပကျြအောငျလုပျခဲ့သလိုဖွဈသှားတယျ။ အားလုံးကစိတျပကျြကွတယျ။ လလှေငျ့နတေယျပေါ့။ အဲဒီတုနျးက အမလညျး စိတျညဈညဈနဲ့ လမျးတှေ ပတျလြှောကျနတေယျ။ တခြို့တှကေဆို အိမျကိုမေးတယျ။ နငျ့သမီးက ဘာလုပျနတောလဲ ဆိုပွီးလေ.. စိတျထဲမှာတော့ တဈနကေ့ရြငျ တဈခုခုလုပျပွမယျဆိုတဲ့ စိတျလေး ရှိတာပေါ့။
Q : အခုဆိုရငျ အဈမလညျး အောငျမွငျလာပွီ။ ဒီလိုမအောငျမွငျခငျက ကွုံခဲ့ရတဲ့ အခကျအခဲတှရှေိရငျလညျး ပွောပွပါဦး။
အခကျအခဲတှလေညျးရှိပါတယျ။ အသကျအရှယျကွောငျ့ နဲ့ မရငျ့ကကျြသေးတာကွောငျ့လို့ အဈမကတော့မွငျတယျ။ တဈခါတဈခါကရြငျ လုပျနတောတှကေို ရပျလိုကျတော့မယျလို့ တှေးမိလိုကျတာတှလေညျးရှိတယျ။ ဒါပမေဲ့ နောကျပိုငျးမှာ သိလာတာက ကိုယျက ပွဿနာတဈခုကို ဖွရှေငျးလိုကျတိုငျး တဈဆငျ့ပိုတကျသှားတယျ။ သူမြားတှထေကျ ပိုသာသှားတယျဆိုတာပါပဲ။ ပွဿနာတှဆေိုတာက ကွုံကိုကွုံရမှာပဲ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျရငျဆိုငျမယျဆိုရငျ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ အပျေါရောကျလာမှာပါပဲ။
ဒါကတော့ မခြိုလဲ့အောငျ မြှဝပေေးခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ အကွောငျး၊ သူ့ရဲ့ အားထုတျမှုတှေ နဲ့ အလုပျကိုမွတျနိုးစိတျ၊ သူ့ရဲ့ ခံယူခကျြ စတာတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ယောငျးတို့လညျး သူ့ရဲ့စကားတှကေနေ ခှနျအားရကွလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ရငျး…
Tags: founder, Interview, Motivation, Myanmar Food, youth
စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာ ဒီလိုပွဲလေးတွေ သွားတက်လိုက်ဦးနော်…
Sugar Cane December 20, 2018